August 2010 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on August 27, 2010 August 27, 2010 by kyawkyawoo
27#62#(ဤရုပတ်တုများ မြင့်မြတ်သလော)။ သို့တည်းမဟုတ် အကြင်အရှင်မြတ်ပင်(မြင့်မြတ်တော်မူပါ သလော။) ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိအား မလွှဲမရှောင်သာသောသူ (ဒုက္ခသည်)က ဟစ်ခေါ်(တမ်းတ)လေသောအခါ၎င်းအားပြန်၍ ထူးတော်မူ၏။ ၎င်းပြင် ထိုအရှင်မြတ်သည်ဘေးဒုက္ခကိုလည်း ဖယ်ရှားတော်မူ၏။ ထိုမှတစ်ပါး ထိုအရှင်မြတ်သည် ကမ္ဘာမြေ၌ အသင်တို့အား ကိုယ်စားလှယ်များ ပြုလုပ်တော်မူ၏။… Read more Kaaba, the center of Universe
Posted on August 24, 2010 August 24, 2010 by kyawkyawoo
What is Sajdat al tilaawah? Sajdah # 1 : Juz’9: Surah Al A’raf (7) Ayat 206 “Those who… Read more Sajdat al-tilaawah with Myanmar Translations
Posted on August 23, 2010 by kyawkyawoo
The holy month of Ramadan unites all Muslims in fasting, feasting, worship and prayer. It isatime for contemplation,… Read more Why is Ramadan Special?
Posted on August 13, 2010 August 13, 2010 by kyawkyawoo
မနေ့တနေ့ကဆော်ဒီသတင်းတွေမှာလက်ရှိ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်ကိုမက္ကာမြို့တော် ရဲ့စံတော်ချိန်နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုပိုသိချင်လို့အင်တာနက် ဂူးဂဲလုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီအကြောင်းကိုခံပြီး ( အဘ်ဒူအယ်ဘာဆက်အယ် ဆိယဒ်) ဆိုတဲ့အီဂျစ်မှမွတ်စလင်ပညာရှင်ကို ဒီနေရာမှာရစရာမရှိအောင် စော်ကားထားတာကိုဖတ်ရကြားရတယ်။ ပိုဆိုးတာက အစ္စလမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တွေဟာအားလုံးခတ်တုံးတုံးတွေပဲ၊သူတို့ကိုယုံအောင်ခတ်ညံ့ညံ့ပညာရှင်တွေကလိမ်ပေးနေ ရ တယ်လို့…စွပ်စွဲတဲ့အပြင် တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုပါစော်ကားတဲ့စကားတွေကို ရမ်ဇမ်ပထမနေ့မှာကြား ရတော့… Read more မက္ကာမြို့တော် နဲ့ကမ္ဘာ့အချိန်
Posted on August 12, 2010 August 28, 2012 by kyawkyawoo
What is Golden Ratio = 1.6818 ? Read Here. Then watch this youtube video, Golden Ratio Point of the World… Read more Golden Ratio and Holy City Mekkah